ANDROID ပေါ်မှာ SHAZAM သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို - အန်းဒရွိုက် - 2019
အန်းဒရွိုက်များအတွက် Shazam app ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Yandeks.Navigator ရုရှားတွင် OS ကို Android အတွက်လူကြိုက်အများဆုံး browser များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီ app ကြွယ်ဝသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဝါကြွားတတ်, အင်တာဖေ့ရုရှားအတွက်လုံးဝဖြစ်ပြီး, ဖောင်းပွ၏မရှိခြင်း။ ဒါ့အပြင်တာတော့သေချာတယ်အားသာချက်ကိုခေါ်ပါကလုံးဝအခမဲ့ကြောင်းနိုင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဆောင်းပါးထဲမှာသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း Yandeks.Navigatorom သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။
Android ပေါ်မှာ Yandeks.Navigatorom အသုံးပြုမှု
အောက်ကပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, သငျသညျ, ထို browser ကိုစိတ်ကြိုက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်း mode မှာလမ်းကြောင်းကို run နှင့်လမ်းမပေါ်တွင်မမျှော်လင့်ဘဲအခြေအနေများတွင်အပိုဆောင်း tools တွေကိုသုံးပါ။
ယင်း Android ကိုစမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ Yandeks.Navigator ကို download လုပ်ပါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ကို click နှိပ်ပြီး, ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "Install" နှင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် download, လျှောက်လွှာအဘို့အစောင့်ပါ။
Yandeks.Navigator ကို download လုပ်ပါ
အဆင့် 2: တက် Set
အညွှန်းကစိတ်ကြိုက်ခံရဖို့ရှိပါတယ်, အသုံးပြုရလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, installation ကိုအပြီးသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများ၏ Desktop ပေါ်မှာလျှောက်လွှာ icon ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Yandeks.Navigator သွားပါ။
ပထမဦးဆုံးက start screen ကိုမှာ geolocation နဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက်လျှောက်လွှာဝင်ရောက်ဖို့နှစ်ခုတောင်းဆိုမှုများကိုခွင့်ပြုချက်ပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်စေရန်, Yandeks.Navigatora က၎င်း၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးဖို့အကြံပြု - သတင်းစာ "Allow" ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံး၌တည်၏။
ထို့နောက် button ကို click "Menu ကို" မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ညာဘက်ထောင့်နှင့်မှ navigate "Settings" ကို။ သွားကြဖို့ပထမဦးစွာကဒ်နှင့်အတူဆက်စပ်ပီ settings ကိုရလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်ရေကြောင်း၏အသုံးပြုမှုကိုထိခိုက်စေသည်ဟုသူတို့သာစဉ်းစားပါ။
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "မြေပုံကြည့်ရန်" နှင့်လမ်းများနှင့်လမ်းများ၏စံအစီအစဉ်ဒါမှမဟုတ်ဂြိုလ်တုအကြားကိုရွေးချယ်ပါ။ လူတိုင်းကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ကဒ်ကိုမြင်ပေမယ့်ဒါဟာသိထားမြေပုံများအားသုံးစွဲဖို့ကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
သည်အော့ဖ်လိုင်း mode ကိုအတွက်ရေကြောင်းကိုအသုံးပြုပါ menu ကိုသှားဖို့ "ဒေါင်းလုပ်မြေပုံ" နှင့် search bar ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။ ယင်းနောက်နိုင်ငံပြည်နယ်များ, နယ်မြေ, မြို့ကြီးများနှင့်သင့်လိုချင်သောတည်နေရာ၏နာမကိုစာဖြင့်ရေးသားမြောက်မြားစွာပြည်နယ်များသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေး၏အဆိုပြုမြေပုံများအားရွေးချယ်ပါ။
သင့်ရဲ့တည်နေရာအိုင်ကွန်ပြောင်းဖို့, tab ကိုသွားပါ "cursor" သုံးယောက် options များထဲကတစ်ခုရွေးပါ။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ settings ကိုကော်လံ - က "အသံ".
browser ကိုသင်လမ်းမပေါ်တွင်လမ်းကြောင်းများနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုပြသပါလိမ့်မယ်ရသောသင်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါရန်, သင့်လျော်တဲ့ tab ကိုသွားပါနှင့်ရရှိနိုင်ဘာသာစကားများတဦးတည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် settings ကိုပြန်သွားဖို့, အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိမြှားကို click လုပ်ပါ။
အသံတစ်သံလက်ထောက်ကို select လုပ်ဖို့, tab ကိုသွားပါ "ကြေညာချက်များ" သငျတို့သစကားသံကိုသရုပ်ဆောင်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ နိုင်ငံခြားရေးဘာသာစကားများစံယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအသံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရုရှားခြောက်လရာထူးရရှိနိုင်ပါသည်။
ပြီးပြည့်စုံအဆင်ပြေဘို့, ကျန်ရှိနေသေးသောသုံးပစ္စည်းများ enabled ကနျြရစျသငျ့သညျ။ voice activation လမ်းတစ်လမ်းကြောင်းမှတက်ရှာနေမဟုတ်, သင်ကကူညီပါလိမ့်မယ်။ အမိန့်အပြီးသွားချင်သည့်နေရာကိုလိပ်စာပြောပါကလောက် "Yandex Listen".
အညွှန်းစွန်းလွယ်ကူခြင်းအဘို့ဤအခြေခံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံပါ။ သို့သော်လည်း parameter စာရင်း၏အောက်ခြေတွင်ပိုပြီးအနည်းငယ်အချက်များဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကသူတို့အပေါ်မှာစောင်းဒါသိသာမဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် 3: Navigator အသုံးပြုခြင်း
လမ်းကြောင်းတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကို click "ရှာရန်".
အသစ်ကပြတင်းပေါက်မှာအဆိုပြုထားအမျိုးအစား၏တည်နေရာကိုရွေးပါ, ကိုယ်တိုင်ခရီးစဉ်, ဒါမှမဟုတ်များ၏သမိုင်းလိုချင်သောလိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။
ဒါမှမဟုတ်လို့ပြော: "Yandex Listen"ထိုနောက်မှစာသားကိုမျက်နှာပြင်နှင့်အတူငယ်လေးတစ် box ရဲ့အောက်ခြေမှာပေါ်လာပါ "အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ"သငျသညျကိုမောင်းဖို့လိုအပ်ရှိရာလိပ်စာကိုသို့မဟုတ်နေရာလို့ပြောပါ။
သငျသညျအော့ဖ်လိုင်း mode မှာအလုပျလုပျဖို့ကတ်များဒေါင်းလုပ်လုပ်မရကြလျှင်, ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းတစုံတယောက်သောသူသည်မိုဘိုင်းအင်တာနက်သို့မဟုတ် Wi-Fi မပါဘဲသင်ကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါ Navigator ပြီးနောက်သင်ကပေါ်တဲ့နေရာသို့မဟုတ်လိပ်စာ destination သို့နှစ်ခုအများဆုံးချက်ချင်းလမ်းကြောင်း၏အကွာအဝေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်ပြားကြလိမ့်မည်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်လျော်တဲ့နှင့်စာနယ်ဇင်း Choose "ဖွင့်သွားပါစေ".
ထို့ပြင်မျက်နှာပြင်ထိပ်, ပထမဦးဆုံးအလှည့်ရန်မြန်နှုန်းအကွာအဝေးညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်, နှင့်အချိန်ကျန်ရှိသောရှိရာ, mode ကို trip မှပြောင်းလဲပစ်ပါလိမ့်မယ်။
ထိုနောက်မှသင်ပီ၏ညွှန်ကြားချက်အပေါ်သွားကြဖို့ရှိသည်။ သို့သော်ဤတစ်ခါတစ်ရံမှားနိုငျသော technique ကိုကြောင်းကိုမေ့လျော့ကြပါဘူး။ လမ်းနှင့်ယာဉ်အသွားအလာဆိုင်းဘုတ်များတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်လော့။
Yandeks.Navigator ကိုလည်းအသွားအလာယိုထဲမှာဖမ်းမိထားကြောင်းကိုရှောင်ရှားရန်, ပိတ်ဆို့မှုကိုကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာဒီ feature ကိုသက်ဝင်ဖို့, အသွားအလာအလင်း icon ကို click လုပ်ပါ။ ထို့နောက်မြို့လမ်းများသူတို့လက်ရှိတင်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ, Multi-အရောင်ရလိမ့်မည်။ လမ်းများအစိမ်း, အဝါ, လိမ္မော်ရောင်နှင့်အနီရောင်အရောင်များဖြစ်ကြသည် - ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ရှည်လျားယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမှအခမဲ့လမ်းကနေတတ်၏။
အသုံးပြုသူအဆင်ပြေဘို့, developer များမဆိုယာဉ်မောင်းမှမရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်လူကူးမတော်တဆမှုမှလစျြလြူရှုနေသောလမ်းဖြစ်ရပ်များ, ရန်လမ်းညွှန်မှု function ကို Yandeks.Navigatora မှတ်ချက်များဆက်ပြောသည်ပါပြီ။ သငျသညျဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းလိုပါကအထဲမှာတစ်ပေါင်းနှင့်အတူတြိဂံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ။
မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာထို့နောက်သင်သည်မည်သည့်မှတ်ချက်နှင့်အတူမြေပုံပေါ်တွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်ကြောင်းထောက်ပြများစာရင်းကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမတော်တဆမှု, လမ်း၏ပြုပြင်, ကင်မရာများသို့မဟုတ်အခြားအဖြစ်အပျက်ရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်, အလိုရှိသောဇာတ်ကောင်ကို select တစ်ဦးမှတ်ချက်ရေးလိုချင်သောတည်နေရာနဲ့စာနယ်ဇင်းရန်သင့် pointer ကိုရွှေ့ "Install".
ထိုအခါဤအရပ်ဌာန၌မြေပုံပေါ်တွင်သေးငယ်တဲ့ pointer ကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှငျ့သငျအသုံးပြုသူများထံမှအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အသစ် Yandeks.Navigatore function ကိုခင်းကျင်းပြသယာဉ်ရပ်နားသည်ထင်ရှား။ , ကသက်ဝင်စေဖို့, အင်္ဂလိပ်စာလုံး၏ပုံစံအတွက်ခလုတ်ကို၏အောက်ပိုင်းလက်ဝဲထောင့်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ ": P".
ဒီခြေလှမ်းတစ်ခုအဆုံးရန်ရေကြောင်းနှင့်အတူအဓိကအလုပ်ပါ။ Next ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
အဆင့် 4: အော့ဖ်လိုင်း mode မှာလုပ်ငန်းခွင်
သငျသညျလကျမှာအင်တာနက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးက GPS receiver နဲ့အလုပ်လုပ်စမတ်ဖုန်းလည်းမရှိလျှင်, Yandeks.Navigator နှင့်ဤအမှု၌အလိုရှိသောအမှတ်ရကူညီပေးပါမည်။ သို့သော်ကိုသာစမတ်ဖုန်းပြီးသားသင့်ရဲ့ဧရိယာ၏မြေပုံ loaded သို့မဟုတ်ကြိုတင်၌သငျတို့ကတညျဆောကျလမ်းကြောင်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ကြောင်းအခြေအနေပေါ်။
လမ်းကြောင်း၏မြေပုံဆောက်လုပ်မှုအတွက်တည်ဆဲ algorithm နှင့်အတူတူညီအွန်လိုင်းကြလိမ့်မည်။ ထိုအကြိုတင်မဲအတွက်အလိုရှိသောလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အမိန့်ရှိခလုတ်ကိုနှိပ် "ကျနော့်နေရာများ".
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းသင့်အိမ်နှင့်အလုပ်လိပ်စာများကိုထည့်ပါ, အညီ "အနှစ်သက်ဆုံး" သောလမ်းညွှန်၏အစိတ်အပိုင်းရန်လိပ်စာများကိုထည့်ပါ။
အခုတော့ Pre-loading လုပ်တာမြေပုံနှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်း mode မှာလျှောက်လွှာကိုအသုံးနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးအသံဖြင့်အမိန့်ပေးဟုပြော "Yandex Listen" နှင့်ကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်သင်လမ်းကြောင်းချင်ရှိရာတည်နေရာကိုရွေးပါ။
အဆင့် 5: tools တွေကိုအသုံးပြုခြင်း
ကျနော်တို့ကိုခေါ်မီနူးထဲမှာ tabs များ၏အုပ်စုတစုရှိ "Tools"ထိုအများအပြားသည်သင်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းတခုတခုအပေါ်မှာတက်ကြွစွာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူသာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
"ကျနော့်ရဲ့ခရီးစဉ်" - ဒီ feature ကို enable ကို click ရန် "Save"။ ထိုနောက်မှယူနစ်သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကြည့်ရှုတောင်မှသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေနိုင်သည့်, သင့်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကိုအချက်အလက်အားလုံးကိုစောင့်ရှောက်မည်။
"ဒဏ်ငွေယာဉ်ထိန်းရဲ" - သင်ကဒဏ်ရိုက်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးသင့်လျော်သောကော်လံနှင့်ကလစ်အတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းရန် "Check"။ ဒါ့အပြင်ဒဏ်ငွေ၏ရှေ့မှောက်တွင်သူတို့ကိုချက်ချင်းနှင့်လစာနိုင်ပါတယ်။
"ဟုအဆိုပါလမ်းအပေါ်ကိုကူညီပါ" - ဤ tab မှာ, သင်ကပိုက်ဆန်လျှော်ထရပ်ကားသို့မဟုတ်အကူအညီကိုသုံးနိုင်သည်။ အထူးပစ္စည်းကိရိယာသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခေါ်ခြင်း, သင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
လာမယ့် window ထဲတွင်တည်နေရာပေါ်သတင်းအချက်အလက်, ကား, သင်ရောက်ရှိလိုတဲ့နေရာ, သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ, စောင့်ပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လျှောက်လွှာကြှနျုပျတို့၏လမျးညှနျအဆုံးသတ်ထားသည်။ အဲဒီမှာဒီမျိုးကိုအများအပြားစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့် Yandeks.Navigator လုံခြုံစွာအများအပြားအသုံးပြုသူများနှင့်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်သူတို့တွင်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်မှာ install နှင့်ပျော်စရာမွေ့လျော်ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။